Archdiocese of Mandalay blog: February 2013
နူးညံ့သိမ်မွေ့ခြင်း ပါရမီ ဆိုတာ ဘာလဲ?
ဒီတစ်ပတ် ဘာသာရေး အမေးအဖြေ အခန်းကဏ္ဍမှာ ဖြေကြားပေးမယ့် အကြောင်းအရာကတော့ နူးညံ့ သိမ်မွေ့ခြင်း ပါရမီဆိုတာ ဘာလဲဆိုတဲ့ အကြောင်းအရာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ နူးညံ့ သိမ်မွေ့ခြင်း ပါရမီ အကြောင်းကို ရှင်းပြပေးဖို့အတွက် ဦးစွာ ပထမ ခရစ်တော် ဘုရားရှင်တော်မြတ်ရဲ့ မိန့်တော်မူချက် ကျမ်းပိုဒ်နဲ့ အစ ပြုချင်ပါတယ်။
(ရှင်မာတေဦးခရစ်ဝင် ၅း၅) “စိတ်နှလုံး နူးညံ့ သိမ်မွေ့သော သူတို့သည် မင်္ဂလာ ရှိကြ၏။ အကြောင်းမူကား သူတို့သည်၊ မြေကို အမွေ ခံကြရလိမ့်မည်။”
နူးညံ့သိမ်မွေ့ခြင်း ပါရမီဆိုတာ အမျက် ဒေါသဟူသမျှကို မှန်ကန်သော လမ်းစဉ် အတွက် ပြုပြင် ပုံသွင်းပေးတဲ့ ပါရမီတစ်ပါး ဖြစ်ပါတယ်။ နူးညံ့ သိမ်မွေ့ခြင်း ပါရမီဟာ ကြင်နာသော သဘော၊ ကြင်နာသော မနော၊ စိတ်ရှည်သော သဘော စသော အပြုအမူ၊ အပြောအဆိုများနဲ့ ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ စိတ်ရှည်ခြင်း ပါရမီမှ ဆင်းသက် ပေါက်ဖွားလာတဲ့ ပါရမီကြီးတစ်ပါး ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ချို့က နာခံလွယ်တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေကို နူးညံ့ သိမ်မွေ့သူလို့ ယူဆကြတယ်။ နာခံလွယ်တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေကို နူးညံ့ သိမ်မွေ့သူတွေလို့ မခေါ် ဆိုနိုင်ပါ။ နာခံလွယ်ခြင်း ရှိတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ဟာ နာခံခြင်းပါရမီ မိမိ၌ ရှိနေတဲ့ အတွက် နာခံလွယ်ခြင်းဟာ နာခံခြင်းပါရမီ မှ ဖူးပွင့်လာတဲ့ အသီး၊ ရလဒ် အကျိုးတစ်ခုသာ ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ချို့ကလည်း အစွဲအလမ်းကြီးသူများ၊ သံယောဇဉ်ကြီး သူများကို၊ နူးညံ့သိမ့်မွေ့သူလို့ ထင်တတ်ကြပါတယ်။ တကယ်တော့ အစွဲ အလမ်းကြီးခြင်းဟာ၊ နူးညံ့ သိမ်မွေ့ခြင်း ပါရမီကို ဆန့်ကျင်ဖက်ပြုနေတဲ့ မကောင်းမှု ဒုစရိုက် တစ်ခုသာ ဖြစ်တယ်။
နူးညံ့ သိမ်မွေ့တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ စိတ်နေ စိတ်ထားဟာ အမြဲတမ်း နူးညံ့ နေတယ်။ တည်ငြိမ် နေတယ်။ သိမ်မွေ့ နေတယ်။ နူးညံ့ သိမ်မွေ့ခြင်း ပါရမီရှိတဲ့သူဟာ သူ တစ်ပါးရဲ့ ထိခိုက် စော်ကားမှုတွေကို ခံရပြီဆိုရင်လည်း အမျက် ဒေါသ မထွက်၊ စိတ် အနှောင့်အယှက် မဖြစ်ပဲ၊ သည်းခံ တတ်တယ်။ မကောင်းမှု ဟူသမျှကို ရှောင်ရှားတတ်တယ်။ နူးညံ့ သိမ်မွေ့ခြင်း ပါရမီဟာ မေတ္တာ၊ ကရုဏာရှိတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှသာ သီးပွင့် လေ့ရှိတဲ့ ပါရမီတစ်ပါး ဖြစ်တယ်။ နူးညံ့ သိမ်မွေ့ခြင်း ပါရမီရှိတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ဟာ မိမိသည် အဆိုးဝါးဆုံး အခြေအနေမှ အကောင်းဆုံး အခြေအနေသို့ ပြောင်းလဲဖို့ အတွက် အချိန် ယူခဲ့ရသလို၊ တစ်ပါးသူ ပြောင်းလဲဖို့အတွက်လည်း အချိန် ပေးတတ်ကြပါတယ်။ မျှော်လင့်ခြင်း အပြည့်နဲ့ တစ်ပါးသူ ပြောင်းလဲမယ့်နေ့ရက်ကို စိတ်ရှည်စွာနဲ့ စောင့်စားတတ်သူ ဖြစ်ပါတယ်။ နူးညံ့ သိမ်မွေ့ခြင်း ပါရမီကို ဘ၀မှာ လက်ဆုပ် လက်ကိုင်ထားပြီး အခြားသူများအနဲ့ အတူ တရား ဆောက်တည်ရာမှာ အင်မတန် ခက်ခဲမှု တွေ့ရတတ်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် မိမိကို နားမလည်တဲ့ သူ၊ မိမိကို အမြဲတမ်း ပြဿနာတွေဖြစ်အောင် ဖန်တီးပေး သူ တွေအပေါ် နူးညံ့စွာ၊ သိမ်မွေ့စွာ ဆက်ဆံ ပြုမှုနိုင်ဖို့၊ အင်မတန် ခက်ခဲပါတယ်။ သို့သော် အစဉ် အောင်မြင်လျက်ပါ။
သူတစ်ပါး အမှားနဲ့ အားနည်းချက်ကို ပြုပြင်ပေးတဲ့ နေရာမှာ နူးညံ့ သိမ်မွေ့စွာ ဆက်ဆံတတ်တဲ့ အကျင့် ပါရမီဟာ မရှိ မဖြစ် အဓိကလိုအပ်နေတဲ့ ပါရမီတစ်ပါး ဖြစ်ပါတယ်။ ခက်ထန်စွာ၊ ကြမ်းတမ်းစွာနဲ့ တစ်ဖက်သူရဲ့ အားနည်းချက်ကို ပြုပြင်ပေးရင်တော့ မပြောင်းလဲတဲ့ အပြင်၊ ပိုပြီး ဆိုးဝါး သွားနိုင်ပါတယ်။ ဘ၀တစ်ကွေ့မှာ နှစ်သက်စရာ တစ်ကွက်မျှ မရှိတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်များ၊ အရာဝတ္ထုများ၊ နေရာ ဒေသများ၊ အခြေအနေများနဲ့ ကြုံကြိုက်နေကြရပြီ ဆိုရင်- သတိနဲ့ ၀ီရိယနဲ့-နူးညံ့ သိမ်မွေ့စွာ ပြုမူ ဆက်ဆံဖို့၊ နှိမ့်ချစွာ ပြုမူ ဆက်ဆံ ကျင့်ဆောက်တည်ဖို့ အသိနဲ့သတိချပ် ရပါမယ်။ နူးညံ့ သိမ်မွေ့ခြင်း ပါရမီရှိတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ဟာ၊ ဒေါသ ထွက်စရာရှိလျှင် ဒေါသ ထွက်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ရဟန္တာ သူတော်မြတ် ဒေလီဂေါ်ရီ အရှင်မြတ်ရဲ့ တရား ပေးထားတော်မူချက် ကတော့ “လူတော်တော်များများဟာ မှားယွင်းစွာ ပြုမူချက်တွေကို ဒေါကန် သင့်ပေမယ့် ဒေါမကန်ကြပဲ လျစ်လျူရှု ပစ်ထားကြတာကို တွေ့ရပါတယ်”တဲ့။ မှန်ပါ ပေတယ်။ ရှင်းအောင် -ဥပမာ ပေးရမယ်ဆိုရင် “ကျောင်းဆရာတစ်ဦးဟာ မိမိရဲ့စာသင်ခန်းမ အထဲမှာ မိမိရဲ့ တပည့်တွေ ဆူပူ သောင်းကျန်း စည်းကမ်းပျက်နေမှုကို ဒေါသ အမျက်မထွက်ပဲ၊ လျစ်လျူရှုပြီး နေနိုင်တယ်ဆိုရင် နူးညံ့ သိမ်မွေ့ခြင်း မဟုတ်ပါ။ အဲ့ဒါဟာ သူရဲဘော ကြောင်ခြင်း၊ သတ္တိ မရှိခြင်း၊ ၀တ္တရား ပျက်ကွက်ခြင်းသာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဘ၀မှာ တစ်ခါမျှ စိတ်မဆိုး၊ ဒေါသအမျက် လုံးဝ မထွက်ဖူးတဲ့ သူတွေကို နူးညံ့သိမ်မွေ့တဲ့သူလို့ ခေါ်ဆိုလို့ မရပါဘူး။ နူးညံ့သိမ်မွေ့တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာ၊ ဒေါသ အမျက် မထွက်တတ်တာ မဟုတ်ပါ။ မိမိအထဲ၌ ထွက်ပေါ်နေတဲ့၊ အမျက်ဒေါသကို ထိန်းချုပ်ပြီး တရားကျင့်နေတဲ့ သူပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ နူးညံ့သိမ်မွေ့တဲ့သူမှာ ကလဲ့ စားချေခြင်း မရှိ။ မခံ မရပ်နိုင်ဖြစ်ခြင်း မရှိ။ ယုတ်မာခြင်း၊ ကောက်ကျစ်စဉ်းလဲစွာ ပြုမူ တုံ့ပြန်ခြင်း လုံးဝ မရှိ။ နူးညံ့ သိမ်မွေ့တဲ့ သူတိုင်းမှာ Self-defence လို့ခေါ်တဲ့ မိမိ ကိုယ်ကျိုးစီးပွား၊ အသက်အန္တရာယ် စသည်တို့ အတွက် အမြဲ ခုခံ ကာကွယ်မှု ရှိရပါမယ်။ Mainteance of right ငါ့အလို့ ခေါ်တဲ့ မိမိ ရပိုင်ခွင့်၊ မိမိ ရရှိထားတဲ့ အခွင့်အရေးများ ဆက်လက် တည်တန့်ရေးအတွက် ကြိုးပမ်းကြဖို့ ၀တ္တရား ရှိပါတယ်။
ဘာမျှ ခံစားချက် မရှိတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေ ကျားကျား ယားယား မရှိတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေ၊ ကျေးကျွန်လို အောက်ကနေပြီး သူတကာ အများကို နေရာတကာမှာ ခခယယ လုပ်နေတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေကို နူးညံ့ သိမ်မွေ့တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေလို့ ခေါ်ဆိုလို့ မရပါဘူး။ နူးညံ့သိမ်မွေ့တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ဟာ- သူတစ်ပါးအပေါ်မှာ စေတနာ သဒ္ဒါတရား အပြည့်နဲ့ စိတ်ထား မွေးမြူပြီး ဆက်ဆံနိုင်တယ်။ စေတနာ အပြည့်နဲ့ အမြဲတမ်း သည်းခံတတ်တယ်။ တည်ကြည်စွာနဲ့ ဆက်ဆံ နေထိုင်တတ်သူ ဖြစ်တယ်။ ချစ်ခြင်း မေတ္တာ ပါရမီရယ်၊ နူးညံ့ သိမ်မွေ့ခြင်း ပါရမီရယ်၊ နှိမ့်ချခြင်း ပါရမီရယ် - ဒီ ပါရမီကြီး (၃)ပါး ရှိတဲ့သူဟာ သူတကာ အများအပေါ်မှာ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ရှိတယ်။ သူတကာ အများ ချဉ်းကပ်ဖို့လည်း လွယ်ကူတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်။ နူးညံ့ သိမ်မွေ့တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ဟာ သူတကာ အများနဲ့ ဆက်သွယ်မှုပြုတဲ့နေရာမှာ ချိုသာစွာ၊ ပြေပြစ်စွာ ဆက်သွယ်တတ်ပါတယ်။
ရဟန်း အမတ် ဆရာတော် Cardinal Newman အရှင်သူမြတ် တရားပေးထားချက် ကတော့ “နူးညံ့ သိမ်မွေ့တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ဟာ သူတစ်ပါးရဲ့ ထိခိုက် စော်ကားလာတဲ့ ဝေဒနာကို သည်းခံခြင်းတရား လက်ကိုင်ထားပြီး ခံထမ်းလွန်းလို့ လုံးဝ မခံစားရတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ပါလားဟု ဘေးကနေ ကြည့်ပြီး သတ်မှတ်ရတော့ မလိုလို ဖြစ်နေပြီတဲ့။” တကယ် နူးညံ့ သိမ်မွေ့တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ဟာ တစ်ဖက်သူရဲ့ ဘ၀မှာ ပြဿနာ တက်လာနိုင်တဲ့ ထင်မြင် ယူဆချက်တွေ တဖက်သူရဲ့ ဘ၀မှာဖြစ်ပေါ် လာနိုင် လာတဲ့ ဆန့်ကျင်ဖက် ခံစားချက်တွေ အဟန့်အတားတွေ သံသယ၀င်မှုတွေ မသေမချာ မရေရာမှုတွေ၊ အမျက်ဒေါသ ထွက်လာနိုင်မဲ့ အရာ အားလုံးကို အမြဲတန်း ရှောင်တယ်။ ဖယ်ရှားလေ့ ရှိတယ်။ တစ်ဖက်သူ ခံစားသွားအောင် စိတ် အနှောင့်အယှက် ဖြစ်သွားအောင် ဘယ်တော့မျှ မလုပ်။
နူးညံ့ သိမ်မွေ့ခြင်းပါရမီကို ဘ၀မှာ ရရှိလာအောင် ဘယ်လိုလုပ်ပြီး ရယူရမလဲ ဆိုရင် နူးညံ့ သိမ်မွေ့တဲ့ ပါရမီကို ငါ ရကိုရမယ်ဆိုတဲ့ သန္နိဌာန်ချပါ။ ဘုရားရှင်ထံ ဆုတောင်းပါ။ စိတ်ရှည်ပါ။ ကြိုးစားပါ။ အဆုံးမှာ ရရှိ လာပါလိမ့်မည်။ နူးညံ့သိမ်မွေ့တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ကို ဘုရားရှင်ရဲ့ ၀ိညာဉ်တော်က ထိန်းချုပ် ထားပါတယ်။ တစ်နေ့ထက် တစ်နေ့ ပိုပြီး နူးညံ့ သိမ်မွေ့လာအောင် ပြုပြင် ပုံသွင်း ပေးနေတော်မူပါတယ်။ လူဟာ ကြင်နာ သနားတတ်ခြင်း သိမ်သိမ်မွေ့မွေ့ ရှိခြင်း သူတစ်ပါးကို ချီးမွမ်း တတ်ခြင်း၊ ချိုသာစွာ နှုတ်ဆက်တတ်ခြင်း၊ ယဉ်ကျေး သိမ်မွေ့ခြင်း၊ စည်းကမ်ရှိခြင်းတွေ ဘ၀မှာ ပေါ်လွင်နေပြီ ဆိုရင် နူးညံ့ သိမ်မွေ့ခြင်း ပါရမီ ရှိနေသူလို့ သိနိုင်ပါတယ်။ နူးညံ့သိမ်မွေ့တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ဟာ စိတ်ဓါတ် ကျပြီး ဘ၀ကို လက်လျှော့ အရှုံးပေးတော့မယ့် သူကို အရှုံး မပေးရလေအောင် ၀ိုင်းဝန်း ကူညီခြင်း၊ နှစ်သိမ့် အားပေးခြင်းများ ပြုပေးလေ့ ရှိပါတယ်။
နူးညံ့ သိမ့်မွေ့တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ဟာ တစ်ပါးသူရဲ့ တွေးခေါ် ဆင်ခြင်မှု ပေါင်းသင်း ဆက်ဆံရာမှာ စိတ်ဓါတ် ခံယူချက်တွေ မှန်ကန်လာစေဖို့ ထောက်မ၊ ကူညီ ပံ့ပိုး ပေးသူဖြစ်တဲ့အတွက် ငြိမ်းချမ်းရေး မျိုးစေ့ကြဲသူ ဖြစ်နေပါတယ်။ နူးညံ့ သိမ်မွေ့ခြင်း ပါရမီ ကိုယ်စီမှာ ရှိလာ ကြပြီဆိုရင်၊ မိမိသည် ပြေပြစ်စွာ ဆက်ဆံပြုမူ လိုလာတတ်ပြီဖြစ်တဲ့အတွက် သူတစ်ပါးကို သံလိုက်တုံးကဲ့သို့ ဆွဲဆောင်လာနိုင်သူ ဖြစ်လာပါတယ်၊ တစ်ပါးသူကို ရင့်ကျက် လာစေတယ်။ တစ်ပါးသူကို စိတ်ချမ်းသာ စေတယ်။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ ခရစ်တော် ဘုရှားရှင်ရဲ့ ဖိတ်ခေါ်သံကို နှလုံးသွင်းကြပါစို့ ....
(ရှင်မာတေဦး ခရစ်ဝင် ၁၁း၂၉) “ငါ့ထံ၌ နည်းခံကြလော့၊ ငါသည် နူးညံ့ သိမ်မွေ့ နှိမ့်ချသော စိတ်နှလုံးရှိသည်ကို ငါ့ထံ၌ သင်ကြားကြလော့”
နူးညံ့သိမ်မွေ့သော ပုဂ္ဂိုလ်များ ဖြစ်နိုင်ကြလျက်၊ ငြိမ်းချမ်းရေး မျိုးစေ့ကြဲသူများ ဖြစ်နိုင်ကြပါစေ။
Posted by Archdiocese Of Mandalay Blog at 3:57 PM
မပြတ်တမ်း လှမ်းစို့လေး။ ။
Posted by Archdiocese Of Mandalay Blog at 7:24 PM
ဖေဖော်ဝါရီလအတွက် အသက်ပေး နှုတ်ကပါတ်တော်
“သင်တို့ကိုချစ်သောသူတို့ကို သင်တို့ချစ်ပါ လျှင် သင်တို့အား အဘယ်ကျေးဇူးတင်ရပါသနည်း။ အကြောင်းမူကား အပြစ်ရှိသောသူတို့ပင် မိမိတို့ကို ချစ်သောသူတို့ကို ချစ်ကြ၏” (LK.6:32)
ဒီလအတွက်နှုတ်ကပါတ်တော်ဟာ ရှင်လူကား ခရစ်ဝင် ကျမ်းကဖြစ်ပြီး ခရစ်တော်ရဲ့ တောင်ပေါ် ဟောတဲ့ သြ၀ါဒမှာ ထုတ်နှုတ်ထားပါတယ်။ ဒီအပိုဒ်မှာ ခရစ်တော်ဟာ ဘုရားသခင်နိုင်ငံတော်ရဲ့ တောင်းဆိုချက်များနှင့် နိုင်ငံတော်သားတို့ရဲ့ အရည်အသွေးတို့ကို ထုတ်ဖော်ပြသ ခဲ့တယ်။ ဤကျမ်းချက်သည် ကောင်းကင်ဘုံ ခမည်းတော် ဘုရားထံမှ ပုံနမူနာယူ၍ ပုံတူ ကျင့်ကြံစေခြင်းဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့ကို အရှင်ဘုရားထံတော် သို့ပင် ပို့ဆောင်ပေး၏။ ဤစကားများဖြင့် ခရစ်တော်သည် မိမိ တပည့်တော်တို့အား ခမည်းတော်ဘုရား၏ မေတ္တာတော်ကို အတုယူစေလိုသည်။ ခမည်းတော်၏ သားသမီးများဖြစ်လို ကြလျှင် ကိုယ်တော် ချစ်သကဲ့သို့ နီးစပ်သောသူကို ကျွန်ုပ်တို့ ချစ်သွားရမည်။
“သင်တို့ကို ချစ်သော သူတို့ကို သင်တို့ ချစ်ပါလျှင် သင်တို့အား အဘယ် ကျေးဇူးတင် ရပါသနည်း။ အကြောင်းမူကား အပြစ် ရှိသော သူတို့ပင် မိမိတို့ကို ချစ်သော သူတို့ကို ချစ်ကြ၏။”
ဘုရားသခင်မေတ္တာတော်ရဲ့ ထူးခြားလှတဲ့ အမှတ်အသားကတော့ အခမဲ့ အမြတ်မဲ့ စေတနာသန့်သန့်နှင့် ပေးကမ်းခြင်းပင်ဖြစ်တယ်။ လောကမှာတွေ့ရတဲ့မေတ္တာနှင့် ကွာခြား လှပါတယ်။ လောကအချစ်က တော့ အပြန် အလှန်ရမှု၊ ကိုယ့်ကြိုက်နှစ်သက်မှုတို့ အ ပေါ် တည်ဆောက် ထားတယ်။ ကောင်းကင်ဘုံရှိ အဘ ဘုရားရဲ့မေတ္တာတော်ဟာ အတ္တ လုံးဝ ကင်းစင်၏။ ဖန်ဆင်းခံ သတ္တ၀ါတို့ အပေါ် မေတ္တာတော် သွန်းလောင်းရာ၌ ၎င်းင်းတို့၏ တုံ့ပြန်မှုကို မျှော်ကိုးသည် မဟုတ်။ အနန္တ အရှင်မြတ်ဟာ ရှေ့ဆောင်တော်မူ၍ မိမိ၌ ရှိသမျှကို စွန့်ကြဲတော်မူသဖြင့် ထိုမေတ္တာတော်သည် မွမ်းမံ ပေးရုံမက ပြုပြင်ပြောင်းလဲပေးတတ်သော မေတ္တာ ဖြစ်၏။ ခမည်းတော် ဘုရားသည် ကျွန်ုပ်တို့ ကောင်းမွန်သဖြင့်၊ လှပ တင့်တယ်ကြသဖြင့်၊ ချစ်ရခြင်း မဟုတ်။ ကျွန်ုပ်တို့အပေါ်မေတ္တာတော် စွန့်ကြဲခြင်းဖြင့်သာ ဘုရားသခင့် သားသမီးများ၊ မိတ်ဆွေ မိတ်ဖက်များဖြစ် စေမည်။ ၀ိညာဉ်ရေး လှပကောင်းမြတ်မှုကျေးဇူးတော်ကို ကျွန်ုပ်တို့ အတွင်းမှာ ဖန်တီးပေးတော်မူသည်။ ဤနည်းဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့ကို အဘ ဘုရား ချစ်မြတ်နိုးတော်မူ၏။ “သင်တို့ကို ချစ်သော သူတို့ကိုသာ သင်တို့ ချစ်ပါလျှင် သင်တို့အား အဘယ်ကျေးဇူးတင် ရပါသနည်း။ အကြောင်းမူကား အပြစ်ရှိသော သူတို့ပင် မိမိတို့ကို ချစ်သော သူတို့ကို ချစ်ကြ၏။”
အဘ ဘုရားသခင်မေတ္တာတော်၏နောက် အ ရည်အသွေး တစ်ခုမှာ အကြွင်းမဲ့ဖြစ်ခြင်း၊ အားလုံး အကျုံးဝင်ခြင်း ပင်ဖြစ်သည်။ တစ်ဦး တစ်ယောက်ကိုမှ မချန် မလပ်၊ အားလုံးကို ဘုရား ချစ်တော်မူတယ်။ ကိုယ် တော်၏ အတိုင်းအတာသည် အတိုင်းမဲ့ဖြစ်၏။ လိုအပ်မှု ရှိတိုင်း၊ ဟာကွက်တွေ့တိုင်း အနန္တမေတ္တာပေါက် ရောက် လာ၏။ ဒါကြောင့်မို့ ဘုရားရှင်ဟာ ကျေးဇူး မသိတဲ့ သားသမီးများ၊ ကိုယ်တော့်ထံ ပါးမှ ဝေးနေကြတဲ့ လူများအပေါ် ပိုပြီး ကရုဏာသက်၍ ၎င်းင်းတို့ကို ဆွဲဆောင် တော်မူတယ်။ ဒီ အရည်အသွေးနှင့် စွမ်းအင်ရှိသဖြင့် ဘုရားမေတ္တာတော်ကို “အနှောင်အဖွဲ့ ကင်း၍ ဖန်တီး သစ်ဆန်းစေသည့်မေတ္တာ” ဟုခေါ် ရပါတယ်။
“သင်တို့ကို ချစ်သော သူတို့ကို သင်တို့ ချစ်ပါလျှင် သင်တို့အား အဘယ်ကျေးဇူး တင်ရပါသနည်း။ အကြောင်းမူကား အပြစ်ရှိသော သူတို့ပင် မိမိတို့ကို ချစ် သော သူတို့ကို ချစ်ကြ၏။”
ဒီလအတွက် ဤအသက်ပေးနှုတ်ကပါတ်တော်ကို ကျွန်ုပ်တို့ ဘယ်နည်း ဘယ်ပုံကျင့်သုံးကြမလဲ။
ရှေးဦးစွာ -ကောင်းကင်ဘုံ ခမည်းတော်ဘုရား မေတ္တာတော်၏ "Free and Universal” ဆိုတဲ့ သင်္ကေတနှစ်ခုဖြစ်တဲ့ “လွတ်လပ်သည့်စေတနာ ထား ခြင်း”နှင့် “အားလုံး အကျုံးဝင်ရှိခြင်း” တို့ကို လိုက်နာလျက် ဘုရား သားသမီးများဖြစ်ကြပါစို့။ ချစ်ခြင်းအရာ၌ ရှေ့ဆုံးကဖြစ်ပါစေ။ နားလည် ခွင့်လွှတ် တတ်မှု၊ ရက် ရောမှု၊ ပွင့်လင်းမှု ရှိတဲ့မေတ္တာဖြင့် ပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့ ဟာကွက်၊ မည်းကွက်တို့ကို ဖြည့်စွက်ပေးရန် ပထမဆုံးနေရာ ယူကြပါစို့။ အကျိုး ရလဒ် အမြတ်အစွန်းတို့ကို မ မျှော်လင့်တဲ့မေတ္တာသည် စစ်မှန်၏။ ဘုရားသခင်ထံမှ ကျွန်ုပ်တို့ ရရှိထားတဲ့ ၀ိညာဉ်ကျေးဇူးများနှင့် သဘာဝ ကျေးဇူးများကို သူများအတွက်လည်း ဝေငှ အသုံးချ သွားခြင်းဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့ဟာ ဘုရားကျေးဇူး မင်္ဂလာ သယ်ယူ ပို့ဆောင်သူများဖြစ်လာကြမည်။
အထက်က ခရစ်တော်မြွတ်ကြား ခဲ့တဲ့ နှုတ်ကပါတ်တော်ကို လမ်းပြ မှတ်တိုင်သဖွယ် လက်ခံထားရင် ကျွန်ုပ်တို့ ဘ၀မှာဖြစ်ပျက်လေသမျှနှင့် ဘ၀ထဲ ပါဝင် သက်ဆိုင်လာကြသူ ဟူသမျှကို မြင်ကွင်းသစ်နှင့် ကြည့်နိုင်ကြပြီး အားမာန်သစ်နှင့် ချစ်နိုင်ကြမယ်။ ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ မိသားစု၊ အိမ်ထောင်စု၊ စာသင်ကျောင်း၊ ဈေး၊ စက်ရုံ အလုပ်ရုံ၊ ဆေးရုံ- စသည့် ဘ၀ အလုပ်ခွင်တိုင်း၌ ကျွန်ုပ်တို့ဟာ ခရစ်တော်အားဖြင့် ဘုရား ဆောင် ကြဉ်းပေးခဲ့တဲ့မေတ္တာတော်၏ တဆင့်ခံဖြန့် ဝေပေးသူ များဖြစ်ဖို့ အသိတရား ၀င်လာမည်။ ဤသို့ သောမေတ္တာသာလျှင် ကမ္ဘာလောက၏ လက်ရှိ အသွင်ကို ပြုပြင်ပြောင်းလဲပေးနိုင်လေ၏။
Posted by Archdiocese Of Mandalay Blog at 4:06 PM
မိမိကိုယ်ကို အရစ်ကျ သေကြောင်းကြံခြင်း
ဆေးလိပ်ကြော်ငြာများကို အားကျစရာ မင်းသားများနဲ့ ထည့်သွင်းကာ နိုင်ငံရပ်ခြား ၌ကြော်ငြာခဲ့ ကြပါသည်။ ထိုမင်းသား ကိုယ်တိုင် နောက်ဆုံးတွင် ဆေးလိပ်၏ တန်ခိုးကြောင့် အဆုတ်ကင်ဆာကို အလူးအလဲ ခံစားပြီး ဆေးလိပ်ဖြတ်ရန် နောက်ဆုံး တိုက်တွန်းရင်း အသက်စွန့် သွားခဲ့ရပါတယ်။ ယနေ့ခေတ် လူငယ်များသည် ဆေးလိပ်သောက်မှ စတိုင်ကျသ ယောင်၊ ဆေးလိပ် မသောက်ရင် ခေတ်မမှီ သယောင် ထင်ယောင် ထင်မှားဖြစ်နေပါတယ်။ ယောကျာ်းလေးဆို တစ်ခုခုတော့ အမြဲ ဆိုးတတ် ကြတယ်။ ဆေးလိပ်၊ ကွမ်း၊ အရက်၊ ဖဲ၊ မိန်းမစတာနဲ့ ဘယ်ကင်းပါ့မလဲ ဟူ၍ တစ်မျိုးမျိုးတော့ ရှိတတ်ကြတယ်ဟု လက်ခံလာတတ် ကြလေပြီ။ ထိုထဲ၌ မပါလျှင်ပင် ယောကျာ်း မဟုတ် တော့ သယောင်လှောင်ပြောင်ပြောဆို တတ်ကြပါတယ်။ အချို့ ဆိုလျှင် “ခေါင်းဆေးတာ၊ စိတ်ဖိစီးမှုဖြေတာ၊ စဉ်းစားတာ” စသည်ဖြင့် ခေါင်းစဉ် အမျိုးမျိုးတတ်ကာ မူးယစ်ဆေးဝါးကို နည်းမျိုးစုံဖြင့် စွဲလန်းနေ တတ်ကြသည်။
လောကကြီးမှာ ဘုရား ဖန်ဆင်းပေးထားတဲ့ ဒီရုပ် ခန္ဓာကိုယ်ကို ဂရုစိုက်ပေးခြင်းဟာလည်း ဘုရား သခင်ရဲ့ လက်ရာတော်ကို ပံ့ပိုး ကူညီ ချီးမွမ်းခြင်း မဟုတ်ပါလား။ မိမိကိုယ်ကို ရောဂါ ကဝေးအောင် နေထိုင်ခြင်း၊ တကိုယ်ရည် သန့်ရှင်းခြင်း၊ ကိုယ်ကျင့် တရားကောင်း အောင် ဖန်တီးခြင်း သည်လည်း ဘုရားသခင်ရဲ့ သန့်ရှင်းရာ ဗိမ္မာန်ဖြစ်တဲ့ မိမိကိုယ်ကို ထိန်းသိမ်းခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ရရှိလာသော သက်တမ်းကို အပြည့်အ၀နေထိုင်ရန် ကြိုးစားခြင်းသည်လည်း ဘုရားရှင်ရဲ့ လက်ရာ တော်ကို ထိန်းသိမ်းခြင်း မဟုတ်ပါလား။ လောကကြီးမှာ ကိုယ့်ကိုယ်ကို သတ်သေခဲ့ရင် သန့်ရှင်းသော ၀ိညာဉ်တော် ဘုရားဖြစ်တဲ့ ဖန်ဆင်းရှင်ကို စော်ကားတာလို့ ပြောဆို တတ်တယ်။
လူ့ဘ၀က ရခဲတယ်။ လူ့အဖြစ် ဖန်ဆင်းပေးတဲ့ ဘုရားရှင်ကို ကျေးဇူးတင် ရမှာပါ။ ဒီလို တန်ဖိုး ရှိတဲ့ အသက်တစ်ချောင်းကို အဘယ်ကြောင့် ယနေ့ခေတ်မှာ မိမိ ကိုယ်ကို အရစ်ကျသေကြောင်း ကြံနေရ ပါသနည်း။ ဒီအဖြေက ရှင်းပါတယ်။ မိမိ စိတ်အလိုကိုလိုက်ကာ နီကိုတင်းဆိုတဲ့ အဆိပ်ငွေ့ကို အဆုတ်တွင်းသို့ ရှိုက်သွင်းခြင်းဖြင့် ဇိမ်ခံ ပစ္စည်းအဖြစ် သတ်မှတ်ကာ “ဆေးလိပ်သောက်ခြင်း” ပင်ဖြစ်ပါတယ်။ “ကမ္ဘာ့ဆေးလိပ် မသောက်ရေးနေ့” ကို ဒီဇင်ဘာလ(၃၁)ရက်လို့ သတ်မှတ်ခဲ့ပြီး ဒီနေ့ အထိ ဆေးလိပ်သောက်သူ ဦးရေ များပြားနေပါတယ်။ ပညာပေးဟောပြောပွဲများ ကျင်းပပြီး လူငယ်များကို အ သိပေး လှုံ့ဆော်နေသော်လည်း မထိရောက်သေးပါ။
အဆိုးဆုံးကတော့ ပညာပေးရမည့် ကျန်းမာ ရေး ၀န်ထမ်း ကိုယ်တိုင်ပင်လျှင် ဆေးလိပ်ကိုဆေးခန်း ပိတ်ချိန်တွင် အားရ ပါးရ ရှိုက်သွင်းနေသည်ကိုပင် မြင်ခဲ့ ဖူးပါသည်။ ခက်နေပါပြီ။ ထိုသူကို ဆရာလုပ်ဖို့ မည်သို့မျှ မဖြစ်နိုင်ပါ။ ဒါကြောင့်ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းသည် “မိမိကိုယ်ကို အရစ်ကျ သေကြောင်း ကြံတာပါ” လို့ ပြောခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် TV ကြော်ငြာတာက “ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းသည် ကျန်းမာရေးကို ထိခိုက် နိုင်ပါသည်”ဟု သာရှိပြီး ၊ ထိခိုက်သည်ဟု တိုက်ရိုက်မ ပြောထားကြောင်း ငြင်းခုံ ခဲ့ပါသည်။ ကျန်းမာရေး ၀န်ထမ်းလုပ်နေပြီး ကိုယ်ကိုယ်တိုင် စံပြ မလုပ်နိုင်ကြောင်း ပြော တော့ “စံပြဖြစ်အောင် ဘယ်သူလုပ်ခိုင်း လို့လဲ” ဆိုတဲ့ ဆင်ခြေသုံးတဲ့ အဆိုကိုပြောပြီး တုန့်ပြန်တာကို ကိုယ်တွေ့ ကြုံခဲ့ရ ဖူးပါတယ်။လောကမှာ စံပြဖြစ် အောင်နေထိုင်ဖို့ ဘယ်သူကမှ မတိုက်တွန်း ပါဘူး။ မိမိကိုယ်တိုင် ပြုလုပ်ရန်ဖြစ်ပြီး မိမိကောင်းလျှင်ကောင်းသလို တပါးသူလည်း စံနမူနာ ယူမှာပါ။ စာသင်တဲ့ ဆရာဆိုရင် သူ့ ပုံကောင်း သက်သေပြနိုင်မှသာ သူ့ရဲ့ တပည့်ဟာ အနေနီးတဲ့ သူပုံစံ အတိုင်း အတုယူမှာ ဖြစ်သလို၊ ဆေး ၀န်ထမ်းဖြစ်ပြီး လူနာကိုဆေးလိပ်ဖြတ်ဖို့ တိုက်တွန်းပြီး ကိုယ်တိုင် မဖြတ်နိုင်သေးရင် နိယာမ၊ မမှန်နိုင်ပါ။
ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းကြောင့် ခံတွင်း နံသကဲ့သို့ တစ်ကိုယ်ရည် သန့်ရှင်းမှုကို ဆုံးရှုံးခြင်း၊ အရွယ် အိုမင်းခြင်း၊ နှုတ်ခမ်းများ မဲပြာခြင်း၊ မှတ်ဉာဏ်လျော့နည်းခြင်း၊ စိတ်တို လွယ်ခြင်းနှင့် မျိုးရိုးနှင့် ဆိုင်သော နောက်ဆက် တွဲပြဿနာများပါ ခံစားရမည်ကို သိရှိလျက် ယနေ့မှ စ၍ဖြတ်ရန် ကြိုးစားစေချင် ပါတယ်။ ကွမ်းစားခြင်းသည် သွားနှင့် သွားဖုံးများကို ပျက်စီးစေ ခြင်းနှင့် သွားဖုံး ကင်ဆာ အပါအ၀င်ဖြစ်သကဲ့သို့ ဆေးလိပ်၏ ဆိုးကျိုးများ အပြင် အနားကပ်ရုံဖြင့် ဆေးရွက် အနံ့ နံခြင်းမှာလည်း လူအများ မနှစ်သက်သော အရာများဖြစ်၍ ဘုရားသခင် ဖန်ဆင်းထားသော လက်ရာများကို မပျက်ဆီးစေဘဲ လူတိုင်း သက်တမ်းစေ့နေနိုင်ရန် ဒီနေ့မှ စ၍ ဆေးလိပ်ဖြတ်ကြပါစို့။
Posted by Archdiocese Of Mandalay Blog at 4:22 PM
Labels: လူငယ်ကဏ္ဍ, ဆောင်းပါး
ကျွန်ုပ်မှာလည်း အပြစ်များနှင့် . . .
ကျွန်ုပ်နှလုံးလည်း သံသယဆူးနှင့် . . .
ကျွန်ုပ်မှာလည်း စီရင်ချက်များနှင့် . . .
ကျွန်ုပ်မျက်ဝန်းလည်း ဆူးညောင့်များနှင့် . . .
Posted by Archdiocese Of Mandalay Blog at 8:16 PM